Miiraajyada Tamarta elektaroonigga ah ee Soosaarayaasha - Shiinaha Shiinaha Waddo-warshadeedka mitir tamarta korantada, Warshadaha
3PHASE 4WIRE ENERGY METER (Kaarka IC)
Mitirka 3 wajiga 4 siligga tamarta la sii diyaariyey (kaarka IC) waa shey cusub oo lagu cabbiro tamarta tamarta oo ay soo saarteen shirkadeena iyadoo la tixraacayo tilmaamaha farsamada ee GB / T17215.321-2008 iyo GB / T17215.323-2008. Waxsoosaarkan ayaa adeegsanaya wareegyo isku-dhafan oo ballaaran iyo farsamooyin SMT, oo leh hawlo ay ka mid yihiin cabbiraadda tamarta korantada, xog-ururinta, kormeerka waqtiga-dhabta ah, iyo is-dhexgalka macluumaadka.
Hal mitir-wajiga din tareenka Tamarta korantada (firfircoon) waa shey cusub oo lagu cabbiro tamarta tamarta oo ay soo saarteen shirkadeena iyadoo la tixraacayo faahfaahinta farsamo ee GB / T17215.321-2008. Waxsoosaarkan ayaa adeegsanaya wareegyo isku-dhafan oo ballaaran iyo farsamooyin SMT, oo leh hawlo ay ka mid yihiin cabbiraadda tamarta korantada, xog-ururinta, kormeerka waqtiga-dhabta ah, iyo is-dhexgalka macluumaadka.
Hal mitir-wajiga din tareenka korantada korantada (fog) waa shey cusub oo lagu cabbiro tamarta korantada oo ay soo saartay shirkaddeena iyadoo la tixraacayo tilmaamaha farsamada ee GB / T17215.321-2008.Ishiinkaani wuxuu adeegsadaa wareegyo isku-dhafan oo ballaaran iyo geedi socodka wax soo saarka SMT, oo leh hawlo ay ka mid yihiin cabbiraadda tamarta korantada, xog-ururinta, kormeerka waqtiga-dhabta ah, iyo is-dhexgalka macluumaadka.
Wajiga "DIN Rail Energy Meter il IC card)"
Hal mitir-wajiga din tareenka korantada elektaroonigga ah (IC Card) waa shey cusub oo lagu cabbiro tamarta korantada oo ay soo saartay shirkaddeena iyadoo la tixraacayo tilmaamaha farsamada ee GB / T17215.321-2008.Ishiinkaani wuxuu adeegsadaa wareegyo isku-dhafan oo ballaaran iyo geedi socodka wax soo saarka SMT , oo leh hawlo ay ka mid yihiin cabbiraadda tamarta korantada, xog-ururinta, kormeerka waqtiga-dhabta ah, iyo is-dhexgalka macluumaadka.
Wejiga Labaad DIN Tareenka Tamarta orm hoyga）
Hal mitir-wajiga din tareenka korantada korantada (guri-jiif) waa shey cabbiraha tamarta korantada cusub oo ay soo saartay oo ay soosameen shirkadeena iyadoo la tixraacayo tilmaamaha farsamada ee GB / T17215.321-2008.Ishiinkaani wuxuu adeegsadaa wareegyo isku-dhafan oo ballaaran iyo geedi socodka wax soo saarka SMT, oo leh hawlo ay ka mid yihiin cabbiraadda tamarta korantada, xog-ururinta, kormeerka waqtiga-dhabta ah, iyo is-dhexgalka macluumaadka.
3PHASE 4WIRE ENERGY METER (fog)
3 wajiga 4 mitirka tamarta silig (fog) waa shey cusub oo lagu cabbiro tamarta tamarta oo ay soo saarteen shirkadeena iyadoo la tixraacayo tilmaamaha farsamada ee GB / T17215.321-2008 iyo GB / T17215.323-2008. Waxsoosaarkan ayaa adeegsanaya wareegyo isku-dhafan oo ballaaran iyo farsamooyin SMT, oo leh hawlo ay ka mid yihiin cabbiraadda tamarta korantada, xog-ururinta, kormeerka waqtiga-dhabta ah, iyo is-dhexgalka macluumaadka.